Vanotsvaga kuDhailand - Tiri Iye zvino Hiring for Jobs muUAE 🥇
Vanodzidzisa Dubai - Isu Zvino Tava Kuhaya muAFA
Mabasa muDubai eIndia - Tsvaga kuti ungamuwana sei!
Shanda Abroad Dubai - Tsvaga uye Nyorerera Vacancies muUAE
Yakabudiswa na Dubai City Company at January 19, 2018
Tiri Kugara kuMiddle East!
Vanodaidzira Dubai tiri ikozvino kukubatsira iwe kuiswa muEmirates. Tiri kubiridzira vamiririri kubva pamusika wepasi rose webasa. Chinangwa chedu kuratidza vatsva vatsva kuti vawane sei ku Dubai. Uye tiri kukuisa muUnited Arab Emirates. Kunyanya kana iwe uchibva Pakistan kana kuti Indian expat tiri kutarisira kukubatsira tsvaga basa in Brazil.
Kune rumwe rutivi, kushanda muEmirates kunokosha chaizvo kuedza. Isu tiri iye zvino kubhadhara mitsva yepasi rose yekubatsira mumabasa muDubai yevatorwa. Pane rimwe divi, kana uchitsvaga vanobva kune dzimwe nyika Dubai mabasa. Isu tiri kambani yakakodzera iwe. Parizvino isu vavakwikwidzi vakaiswa munzvimbo dzakati wandei.
Boka redu revashandi rekubatsira vanobatsira zvakare vapedza kudzidza muIndiya vashandi. Nekudaro, kana iwe uine ruzivo rwakakwana mubhizinesi. Dubai City Company inobatsira chaizvo kune yepakati-chikamu basa rekutsvaga. Tiri kushanda pamwe nzvimbo dzakawanda dzebasa muDhaibha. Pane zvakaipa, isu tiri kutarisira kukubatsira kuti uwane mari, asi iwe unofanirwa kuva neruzivo rwakanaka. Uyezve, unofanirwa kuva neruzivo rwechimiro cheArabic. Asi isu tiri kutarisira kukubatsira kuwana basa mukati me Dubai kana Abu Dhabi.
Iwo Middle East makambani ayo kambani yedu yekurairidza anoshanda nayo. Parizvino kuunganidza yenzvimbo dzinoverengeka. Semuyenzaniso, Emirates parizvino iri kubatira vanoita zvebhizimusi yezvirongwa zvakati. Vatsva vekutsvaga basa vari kuwana mukana wakakura we shanda kuGulf. Tiri kuwana mamwe mabasa ekuvanzika kwese kune UAE, Qatar, Saudi Arabia neKuwait. Semuenzaniso, kana iwe uine ruzivo mukushambadzira uye IT department ndapota teerera rako curriculum vitae. Tirikumirira muUAE neKatar.
Mabasa muDhaibha nokuda kwekutsvaga mutungamiri kubudirira
Chimwe chezvakanakisisa job search zano rinongoendawo naro. Uye zvechokwadi, isu tiri pano kuti kukubatsira iwe kuva mutsva mushandi muUAE. Dubai City kambani yakakurudzira inopfuura mamirioni mashoma evanotsvaga basa. Kunyanya isu tiri kutsvaga vashandi vane kunze kwenyika vanoshanda ruzivo. Chinangwa chedu chiripo kutungamira vatsva vanotsvaga basa kubva kuzere nyika.
Wobva wavakurudzira uye mukupedzisira nzvimbo ivo muDubai. Isu tiri zvakare kubatsira nyika dzinobva kunyika dzePhilippines kuti dziwane basa muDhailand. Uye mamwe marudzi kuwana ruzivo nezve maroto eArabhu maroto.
Expats mu Dubai inotora zvigaro kune nzvimbo dzakawanda. Chimwe chezviitiko zvinonakidza zvatiri kukubatsira kuti uite. Somuenzaniso unogona kuva marketing job in Dubai, zvakare hoteyo mubasa rekushanda. Zvese izvi zvinouya pamwechete kuti uwane dream job muDubai uye nekutarisira kune zvakawanda. Kune rumwe rutivi, iwe unogona kuwana mamwe mabasa anoshamisa anopa neUber.
Pfungwa inowanikwa kune vose vanoenda kune dzimwe nyika kurota ndeyokuwana Mararamiro ehupenyu. Senge pavanenge vachishanyira UAE ivo onawo hupfumi hwevanhu vechiArabhu vanogara. Kubva padzimba hombe kusvika kumitambo motokari. Iwe unogona kuona kuti inoshamisa sei iyo UAE. Uyezve chiroto chako ndechekutsvaga chinzvimbo chakabhadharwa. Inotsanangura vashandi isu tiri kufamba Dubai. Usaparadza nguva yako inokosha uye kutumira basa kushanda ku Dubai City. Uye regai tikubatsire kuwana mamwe mapeji ehupenyu pamusoro pebasa.
Inotsanangura kuti tiri kuendesa ku Dubai
Tiri kutungamirira sangano rekutsvaga muEmirates. Tine akaisa Indian expatriates uye Pakistani vanotsvaga basa kuDubai. Paunenge uchitsvaga shandura yako yeDubai mararamiro. Kutanga kuve vachangobva kudzidziswa Dubai. Iwe unogona kurodha kutangazve kune yedu kambani uye kutanga kumirira nhungamiro nyowani uye mararamiro emararamiro inopa kuyerera mune yako e-mail.
Padivi rakanaka, unogona kuchengetedza mabasa matsva kubva yako nyika. Kuwana mabasa anofadza anopa muUAE. Uye pasina chinetso chibvumirano chevatariri ve HR. Zvadaro fambai kune vatsva venyu vatsva muA Dubai. Kuisazve zvakare kumakambani edu kunogona kukubatsira iwe kuwana basa. Saka kana iwe uri mutorwa muUAE kubva kuIndia iwe unofanirwa kutarisa maitiro edu.
Tumira CV kune sangano rekutsvaga
Chimwe chemienzaniso yatinokuitira. Ichange iri kukubatanidza newe vatariri vekutsvaga mu Dubai City. Usati watumira CV ndapota chengeta uye ita pfupiso yekurarama mu Dubai. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unofanirwa kuverenga zvakawanda pamusoro peruzivo pamusoro petero yedzimba. Kana zvakadaro kushanyira hurumende smart guta webhusaiti. Sezvinoonekwa zvakare UAE ine yakasiyana dzidzo hurongwa munzvimbo. Kupfupisa funga zvakare nezve zvekufambisa uye zvehurombo. Kupiwa aya mapoinzi, kutumira kuenderera zvakare kuti uwane basa haisi kiyi. Ita kuti vazive zvese kutanga mararamiro eA Dubai.
Vanoshanyira Dubai vanogona kukubatsira kuti uwane basa muUAE.
Expat jobs at Dubai International Airport
MuDubai Guta, iyo Dubai International nhandare yendege inokwenenzvera kutiza. Kugadzira ekumanikidza kupaka mabasa. Uye mabasa enhandare yendege nemitemo uye inopa mafambiro ezvekutakura vanhu mukati meairport. Izvo zvese zvinouya kune chimwe kusikwa mamwe mabasa aripo anowanikwa muUAE. Tinofanira kurangarirwa, nokuda kwechimwechete, mabasa etaisisheni ari kwose kwose anowanikwa ku Dubai. Kutanga basa sezvo mutyairi wetekisi achibhadharwa zvakakodzera. Uye zvechokwadi, iyi ndiyo nzira yakanaka yekushanda pahofisi yendege.
DXB ndiyo inonyanya kupa basa. Kune vatsva vekutsvaga mabasa kubva kuSouth Africa uye ndege yekubhadhara vanoenda kune dzimwe nyika ku Dubai. Kune rumwe rutivi, pane Porsche naFerrari mabasa aripo Ehe saizvozvo bhizimisi maofficial paneimwe nzvimbo vanotarisa kunotora vashandi vatsva vekutsvaga mabasa kune ekutanga mabasa epamba. Uye rimwe rebasa repamusoro rinogona kuoneka paMahotera epamusoro mahotera. Kune nzvimbo shoma mupasi iwe dzaunokwanisa tumirazve vatungamiri vekutsvaga. Zvechokwadi, Dubai Airport imwe yezvi nzvimbo izvi, uye iwe unogona kuedza kuwana basa ikoko.
Zvakajairika kudzinga Dubai kirasi vachishandisa metro. Uye uyu muenzaniso wekutungamira kufunga muDubai. Kune rimwe divi, vapfumi vemuEmirates vanoita bhizinesi vachishandisa ndege uye dzinodhura dzeserura. Havafariri kumirira kusvikira matambudziko emigwagwa akaremara guta racho.
Vafumi vanhu muDhailand vachishandisa helicopter, ndege duku uye iye zvino kunyange drones kuti vafambe. Kunewo maverengeka Pakistani vashandi muDhailand. Uye zvechokwadi, vari kuita mari muUAE. Uyezve, inonyanya kuonekwa muAud Dhabi uye Dubai.
Zvingaita sei kuti Expat iwane mabasa mu Dubai mari yemusika?
Nechinangwa chekutsvaga nzvimbo yakachengetedzwa yebasa. Jobho anotsvaga anotsvaga basa pamusoro pemusika wemari. Kune runyerekupe kuMiddle East nezve Expo kuvandudza mu2020. Mamwe emakambani ari kutsvagira vatengesi vemari pamusika wemari. Kuzviisa neimwe nzira, expatriates in Dubai kuda mari yekambani. Mubairo uri pamusoro pezvakasiyana, zvakare Indian expats inogamuchirwa kubhizimusi mabasa muUAE. Mamaneja emari yeSouth Africa anoshanda pamusika iwo. Uye pakupedzisira, ikozvino Pakistani vanoita zvebhizinesi zvakare kumhanyisa a career in Dubai zvemari.
Vanodaidzira Mararamiro ehupenyu, zvese zvaungaite pano. Pese pamusika wemari. Semuenzaniso webasa iri mota dzinozivikanwa dzemitambo dzinouya mundangariro. Lamborgini Gallardo, Mercedes MLM, uye SUV mota yakajairika kana iwe wakanaka mune zvemari. Ndiani anoziva angangwariya Panamera suti iwe zviri nani kana iwe uri manejiste nyanzvi. Ehe, zviripo mukana mukuru wevashandi vemunyika dzakawanda. Kunyange zvazvo ruzivo rwako haruna kukwana.
Kurwira uye runako mubairo unobhadharwa zvakanaka unowanzo kubhadhara munhu wese. Mune mamwe mazwi, kana iwe uine hutano hwakanaka hwehutano. Unogona kutanga asi unofanirwa kuyeukwa kuti kushushikana kunouya neiri basa. Kushanda pasi pekumanikidzwa ndiro rakajairika zuva rebasa. Padivi rakashata, haasi munhu wese anokwanisa kushanda pamusika wemari. Zvakare, ramba uchifunga kuti kune akati wandei zvikuru rated makambani muSaudi Arabia. Vari kubhadharawo basa idzva muMiddle East.
Sezve nyaya, iwe uchada kutarisana nebhengi basa mu Dubai kune vafambi. Kana iwe ukauya kunze kwenyika iwe unorovera madziro neDubai bureaucratic system. Pasina kutaura nezvakanyanya zvakashata zvepepa-rinorema kurongeka mubhangi system. Ehe saizvozvo muchiedza unobatanidza mabasa. Uye vamwe vacho kwete ikubatsire nechitarisiko chaicho. Kuti utaure chero zvekukurumidzira kushandira yega mutengi mubazi rebhengi. Iri basa rakanyatso kubhadharwa uye rakawedzerwa mubayiro kuchengetedza exatriates Dubai mararamiro.
Panguva imwecheteyo, iyo bureaucratic muchina uri kushanda 24h. Uye mu Mapurisa eDubai anoshanda zvakanaka, une nzira imwe chete. Usamboita chero kukanganisa, iwe chete unogadzira zvikanganiso uye iwe unodzingwa. Padivi risiri iro, hauzowana basa mune zvemari muUA kana ukakanganisa. Pane kupokana, kubviswa pasi uye kuvakwazve pa basa rakasimba mu Dubai. Zvechokwadi zvichave zvichibvira asi kwete mune mari, kutengesa kana kutengesa kuchakushandira iwe. Kunyangwe izvi zvingava zvechokwadi kune yakawanda paIndaneti mabasa. uye vashandi vanogamuchira nezvisarudzo mumakore achangopfuura zvezvinhu zvakaita seyendevhizheni masevhisi.
Dubai construction jobs for expats
Kune chikamu chikuru chitsva vashandi vachitsvaga basa nebasa rakanaka. Kazhinji kutaura mundima yekuvaka sebasa rekutanga. Nekudaro, kune dzinenge 2,500 nzvimbo dzevashandi dziripo dzekuvaka dzimba zuva rega rega muDubai. Zvakakosha kuti uzive kwete kuvaka kwese mapurojekiti ndeanobhadharwa kwazvo seari paakavakwa Palmu. Kuti ataure neimwe nzira iyo Jumeira hotera ichiri kuvakwa pane imwe nguva. Nzvimbo yakakurumbira munzvimbo dzekuvaka UAE ndeye Mirdif. Panguva ino, kune zvimwe zvekuvakisa zvekuvaka uye dzimba dzekushandisa. Uye makambani matsva eprojimendi anovaka dzimba ikoko mazuva ese.
Kuti uvake uye ushande mumapurojekiti matsva Dubai Guta kuyedza kukodzera zvese zvinonaka uye yakawanda mabhajeti. Mushure mezvese kubva munharaunda yechiArabhu yenzvimbo kusvika vadzingwa kubva kuIndia, Pakistan, South Africa uye akawanda maitiroe. Uye izvi mupfungwa, kunyange expat mukadzi anogona kupiwa muUAE. Uye kugara mumisha mitsva iri muDubai mune dzimwe nguva boka pamwe chete. Saka mutariro inodzinga Dubai uchawana basa. MuDubai, kune zvakawanda munharaunda dzegated kwaunogona kukumbira rubatsiro mukutsvaga basa. Basa rekuvaka rinongogara richizara nezvivakwa.
Ukuwo, kune avo vadzingwa muDubai. Ndivanaani vari kutsvaga basa rekutarisira? Nezvakawanda mubairo uye yakakwirira zvirongwa zvekuvandudza zvirongwa. The Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi inouya nemubhadharo wakanaka. Uye zvirokwazvo nezvevillas akafadzwa kutanga mararamiro eA Dubai. Pamwechete basa rokutarisira basa mukuvaka kuti chokwadi rivepo. Uchitarisa zvakadzama uye uAE mararamiro ehupenyu. Mahofisi ezvivako zvekuvaka ave akanaka kwazvo uye akapararira.
Nzira yekuwana sei muDha Dubai se Expat Engineering jobs?
Nekufamba kwenguva iwe uchaona UAE. Pamusoro webhusaiti yedu kana kutsvaga mabasa online. Basa rouinjiniya harina kunyanya kufarirwa muDubai. Basa rakawanda mikana inowanikwa muMumbai. Pane humwe hurongwa hunouya huri mu 2030 muBud Dhabi kupfuura Dubai. Rudzi urwu rwemabasa haruri rakanaka kubhadhara mabasa anopa.
Iwe unogona kunge une chimiro chinokudzwa muunyanzvi. Asi kune zvishoma chete recruitment agencies kuti iwe unogona kugona kuti uwane basa mune ino. Tinokukurudzira iwe shanyira maIntern East makambani eGulf jobs uye kusvika kune vatungamiri veH HR. Kutumirazve purogiramu yemabasa evhidhiyo hakuiti kunzwisisa.
Dubai inenge yakagadzirirwa vatorwa. Somuenzaniso, kune nzira dzakawanda mukati Dubai City Area kuti uwane basa. Nokuda kwechikonzero ichi, vanopfuura mamiriyoni eE3 vachitsvaga basa vari kuenda kuUAE. Kunyanya injini uye dzidzo yakanaka inokwanisa kuwana basa muUAE. Kazhinji kutaura, kana iwe uine ruzivo rwakakwana kuti uwane zvakanyanya kubhadhara mabasa anopa. Iwe unogona kushandisa zvishomanana Kuwait mabasa ane hukama matipi kune vanotsvaga basa. Uye munhu wese anoziva kuti basa muDubai rinenge yakagadzirirwa vanodzingwa.
Expats Jobs in Dubai uye relocation rubatsiro muUAE!
Isu tiri kutobatsira kuisa expats
Kunyanya mabasa ku Dubai uye Abu Dhabi
Tsvaga Jobho mu Dubai? zvinoshamisa kuti iwe unogona kuwana iyo kurota basa ne Dubai website website. Zvechokwadi zvakakosha kushandisa neCV yako.
Ingoisa upload uye kutanga basa idzva mu Dubai!.